Munich inogadzirira kuvhota kusiya Linux | Linux Vakapindwa muropa
Munich inogadzirira kuvhota kusiya Linux
Munich anga ari mumwe wemapiyona mune izvi chinja kune yemahara software -zvakanyanya kuLinux- uye iwo muenzaniso gare gare yakateverwa nenzvimbo dzakawanda pasirese. Asi mushure memakore mashoma erunyararo kugarisana neWindows, mamwe manzwi vakatanga kusimuka mukutsvaga kutarisisa papuratifomu imwe chete - kushandisa nharo zvingangopokana - uye zvinosuwisa kuti iyi yaive yeMicrosoft.
Chikonzero chikuru cheiyi anti-yakavhurika sosi yekufambisa yave iri mari yehupfumi, kunyanya izvo zvine chekuita nenyaya yekuchengetedza mapuratifomu maviri izvo zvichiri maererano nechiratidzo chake hazvisi nyore kunyatsobatanidza. Uye kune izvi vanowedzera chokwadi chekuti zvimwe zvekushandisa zvikuru hazviwanzo kuwanikwa, kana kana zviripo, ivo vanofungidzira iyo marezinesi anodhura anotengeswa izvo zvakafanana nezvinodhura vamwe vavo veWindows.
Zvakaipisisa zvakadaro vanopokana, kakawanda zvakafanira kusarudza maWindows application asiri akanak asi anowirirana kwazvo neaya anowanikwa kuLinux. Dzese nharo dzinopokana sezvatakambotaura pakutanga, kunyanya kana tichifunga mushumo wakapihwa nekambani yekubvunza yeAccenture, iyo yakaratidza kuti chikamu chikuru chekuwedzera kwemutengo wekushanda weprojekti uyu chakapihwa nenzira yakapihwa na iyo Munich Guta Horo, iyo mukutonga kweAccenture yanga isinganyatso kushanda maererano nekugadziriswa uye kupihwa zviwanikwa zvezvikwata zvayo zveIT.
Zvakare, Accenture uye akapamhama zvikamu zveIT zvepasi rese vanotenda kuti zvingave zvinonyadzisa kutambisa nguva yese yakadyarwa muchirongwa cheLIMuX, zvinove izvo kugoverwa kweLinux kweMunich City Council kwave kudaidzwa, pasina kukanganwa nezvese ruzivo rwakawanikwa panguva ino. Asi kunyangwe paine chirevo chataurwa pamusoro apa, kwave nemazwi akati wandei ayo munguva pfupi yadarika akakwidziridzwa muguta reGerman vachida kusiya Linux, uye basa ravo rinoratidzika kunge rakabhadhara kubva apo masangano evatengi nevevagari vakaratidza izvozvo Ivo vanotarisira kudzoka kuWindows nekukurumidza sezvazvinogona, kunyangwe hazvo zvichizivikanwa kuti kudzorera zvese kumashure kunoreva zvekare kukosha kukuru.
Aya ndiwo maitiro ezvinhu panguva ino, uye kunyangwe sarudzo yakatoitwa kare uye zuva redudziro rave kusvika, isu tichafanirwa kumirira zvishoma kwariri, sezvo zvichitarisirwa kuti hazvizove kusvika mushure meNovember, sezvo iri inguva inotarisirwa yekuona mutengo wekupedzisira wekudzokera kuWindows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Munich inogadzirira kuvhota kusiya Linux
Mashoko akanaka zvakadii!
Paive nekanoni yemari kuhurumende uye neapo neapo achitaura mugari, achiziva Microsoft kuti akagadzirira bhizinesi ...
Uye chinhu chinowanzoitika chinoitika, iyo OS pachayo inogona kuve yakanakisa pasirese asi kana zvirongwa zvikasamhanya zvechivanhu kana kuti zvakananga hazviite, zvinopedzisira zvave chinhu chinotsanangudza, uye chiri chimwe chinhu icho Microsoft pachayo iri kurwisa. Neichi chikonzero, iyo Windows 10 vs 7 quota ichiri kuchinja, nekuti kunyangwe hazvo rutsigiro rwehardware rwakavandudzika pane zvirongwa zvinokanda madhonze muchinyorwa chitsva chesystem.
Zvese izvi zvinoitika nekuda kwekushomeka kwevashandisi kune nharaunda yeiyo inoshanda sisitimu uye mashandisiro ayo. Nezve dzimwe nzira dzekushandisa dzavangave nadzo muWindows, kana muzuva ravo vakaona shanduko seyakanaka, zvinofungidzirwa kuti kudzikisira uku kunofanirwa kutotarisirwa panguva yekuitwa.
Iyo inonhuwirira zvakanyanya sebhizinesi yakatwasuka, uye rusaruro mukutsinhana nezviuru zviuru zveeuros ...
Pamwe chaive chinhu chaitarisirwa. Nehurombo, kana zvasvika pakuchengeta iyo OS up-to-date, muWindows zvinoreva kudhawunirodha zvidzoreso, kuzviisa, kudzorerazve, uye kuramba uchishanda. MuLinux, zvinoreva kutsigira ese mapurogiramu ari kushandiswa uye mafaera akabatana, kuisa iyo vhezheni itsva, uye pakupedzisira kudzoreredza zvese zvirongwa zvaive zvichishandiswa uye yavo inosangana data. Mune mamwe mazwi, basa revashandi vane hunyanzvi uye muchina wainge usisashandiswe kwezuva rese. Ndinovimba, zvese zvakaoma zvichashanda sepakutanga. Kana zvisiri, isu tichafanirwa kutsvaga madhiraivha eiyo OS nyowani, kana zvakatonyanya, tivabatanidze kubva kwavanobva, naiyo, muchina wacho hauchazove nerimwe zuva rekushanda zvekare. Mudunhu rakadai seGerman, pamwe nzira iyi yekushanda haina kudzika zvakanyanya.
Adrián Chero ani mhinduro yako iwe yausina kumboshandisa Linux zvinoita .. muUbuntu iyo yekuvandudza inoitwa zuva nezuva uye iwe une rutsigiro mukureba-kwenguva kugoverwa kwemakore mashanu !!! Uye iyo inokutendera iwe 5 kugadzirisa iyo kugovera pasina kusunungura chero chinhu!
Inguva yakareba sei iwe usati waita linux kugadzirisa? Wakambovandudza linux here?
Iko kusarongeka kutaura, kunoratidza kusaziva kwese kwazvino mamiriro ekuparadzirwa kweLinux.
Iwe hauna iyo yakanyanya fucking pfungwa yeGnu / Linux zvirinani usataure zvisirizvo zvekuti iwe unogona kuvhiringidza vanotanga.
Ufff anodiwa kwazvo Adrian, hauna kumbobvira uri padhuze nekushandira chiteshi neGNU / Linux uye ndinofungidzira kuti kunyangwe muzviroto mune yekumisikidza ine server; kuvhura muromo wako usina zano kune mahara, kufunga zvishoma uye kunyangwe zvirinani pane izvozvo, kudzidza kunodhura zvishoma, ita nhamburiko.
Mudiki Fabian Garcia akadaro
Ndiri Network Manager mune dhipatimendi chitoro muDominican Republic. Kubva 2010 isu takatama zvinopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana emabasa edu nemaseva kuLinux, kunyanya kuUbuntu neCentOs. Dambudziko guru reprojekiti yaive kuramba kwevashandisi kuchinja, asi mushure mekunge vajaira nharaunda, zvese zvakaenda zvinoshamisa. Isu takadzora zvakanyanya rutsigiro rwehunyanzvi rwevashandisi, 90 mavairasi, kana kuiswa kwevatyairi, nezvimwe ...
Pindura kuna Junior Fabian Garcia
Adrian, ini handizive iyo Linux yawakashandisa ... asi iwe wakanganisa chose nezveLinux inogadziridza, uyezve, iwe unogona kuenda kune yepamusoro vhezheni uye usarasikirwe chero dhata.
Pane zvinopesana muWindows ine inozivikanwa Falls Vagadziri Gadziriso, iyo brushes akati wandei maApp kubva sisitimu ... inoshanda chaizvo hongu.
Ndanga ndichishanda muIT chikamu kweanopfuura makore gumi nemaviri, uyezve mazhinji mukudzivirira, neLinux kweanenge makore gumi nemashanu ... uye ini handiise komputa mumba mangu ine Windows, kana nemari yaAdrian
Chinhu chimwe "chisina kukosha" MS yanga ichipa kumushandirapamwe wevamiriri kusvikira vakunda.
Zvimwe zvese zvinokanganisa.
Asi kana mutengo ukawedzera zvakanyanya, kuGerman, ivo vachashurwa nekuda kwekubiridzira mari yeruzhinji, uye imomo mutongo hauna kufanana neSpanish.
Pevhu 3 akagadzirira kutamba paGNU / Linux
Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) Yekupedzisira Kufriiza uye kuburitswa kwakarongerwa Gumiguru 19